Mhlawumbe abantu abaningi bazi ukuthi omunye main futhi izinkomba ezinkulu kwezomnotho yanoma yimuphi zokukhiqiza - kuyinto izindleko izimpahla noma imikhiqizo. ulwazi theory kanye nama-practical umqondo izindleko kwenza ukuhlaziya nokuhlela imisebenzi zokukhiqiza kunoma iyiphi ibhizinisi. umqondo okunjalo njengoba Kubiza kuhlanganisa zonke izindleko ezivelayo yinkampani ngesikhathi ukukhiqizwa kwemikhiqizo kanye nokusetshenziswa yabo.
Intengo izindleko izimpahla ingenye izingxenye ezibalulekile kakhulu kwanoma iyiphi ukudayiswa. Lokhu kuyiqiniso ngenxa yokuthi, ngaphandle kwenkokhiso ukubala amanani efanele umkhiqizo esizayo noma isevisi akunakwenzeka. nobunzima ikakhulukazi ekunqumeni izindleko zebhizinisi ekuqaleni abantu abadala yisikhathi sokuqala ebhekene nale nkinga. Kuyaphawuleka ukuthi ucwaningo umqondo Kubiza nokwamukela amakhono ku nenchazelo has ukuqala ibhizinisi.
Kufanele kuqondwe ngokucacile ukuthi Kubiza yinani yemali izindleko zazo wachitha ekukhiqizeni yokuthengisa imikhiqizo isiqedile.
Icacisa izindleko zokukhiqiza akunzima kakhulu - kudingeka nje ukwazi idatha langempela atholakale inkampani.
Ngakho, imfundo ekubalweni izindleko :
Izindlela ezisetshenziswa ukubala izindleko aziziningi - emibili kuphela. Basuke emelelwa ukubala ngesisekelo kubala ukubala ngesisekelo izilinganiso izindleko zokukhiqiza. Ukusebenzisa izilinganiso izindleko zokukhiqiza kwenza kube nokwenzeka ukubala izindleko umthamo isamba imikhiqizo ekhiqizwa ibhizinisi wonyaka. Kule ndlela has elinye igama - isabelomali.
Le ndlela ehlanganisa ukushintshwa kwezici izihloko ayisishiyagalolunye igama elifanayo, okuyinto ngokufingqiwe. Kuyinto ngonyaka owodwa futhi walokhu summation kuyinto izindleko zokukhiqiza ingqikithi kwesikhathi.
Ekuqaleni ibalwa value, izimpawu izinto eziyisisekelo ze-imikhiqizo ekhiqizwa. Ukuze wenze lokhu, izindleko zinqunywa, okuyinto kubandakanya ukusetshenziswa izinto ezengeziwe asetshenziswe izigaba Lesisemkhatsini zokukhiqiza, kodwa ngesikhathi esifanayo ingxenye umkhiqizo osuphelile.
Kuyadingeka ukuba acabangele izindleko imikhiqizo ephuma kabili isiqediwe futhi siphelile akuthola zemininingwane yezinye izinkampani noma amalungu imikhiqizo ekhiqizwa esewonke. Futhi udinga ukufaka kaphethiloli futhi amandla izindleko.
Eyenziwa ukubala izindleko amaholo bonke abasebenzi phakathi nonyaka. Kuyadingeka ukubala kwemali esetshenziswe ezengeziwe zabasebenzi - 12% yomholo. Iminikelo kumele kubonelelwe yesikhwama yomshuwalense oyisibopho kwezenhlalo, izilinganiso lapho ayalingana 38% yesamba inkokhelo eziyisisekelo futhi ezengeziwe.
Kuhlanganisa lemali ye ukwehla, kanye nezindleko okungenwe kuzona okuqukethwe inkambo imishini namathuluzi adingekayo ekukhiqizeni.
Ukusebenzisa indlela yokubala, kungenzeka ukubala izindleko ngomkhiqizo ngamunye. Ukusebenzisa le ndlela kuhilela manipulation izihloko nantathu ukuthi wafingqa, kuphumele izindleko zokukhiqiza kanye ematfuba.
Ngaphezu izibalo ngenhla kufanele wengeze izindleko ngokuhamba ukuthengiswa kwemikhiqizo, kanye nezinye ukukhiqizwa futhi okungezona ukukhiqizwa izindleko.
umkhiqizo izindleko Okugcwele ibalwa ifomula okuhlanganisa imingcele izindleko emelelwa materials eziyisisekelo (i-MO); ukubaluleka izinto ezengeziwe (CF); izindleko zokuthenga lulwimi siphelile (PD); izindleko zokuhamba (TP); Inani inqubo amandla (E); amacala ukwehla (A); iholo eyisisekelo (LP); amaholo ezengeziwe (ZD); iminikelo yokuphepha komphakathi (Oss); izindleko kwemboni (RR); Guild nezindleko (CR); izindleko ze-non-elikhiqizayo (HP).
Ingqikithi yezindleko (FCS). ifomula kubalwa:
FCS = i-MO + MV + PF + PR + A + E + LP + HT + Oss + CR + RR + hf
Ukusebenzisa le ifomula izitshela ukuthi ukuqaliswa izindleko kuyobalelwa for ngokwehlukile.
Ibutho ebumnyameni futhi. Uchungechunge oluthi "Ash ngokumelene efile okubi": nabalingisi, indima kanye sendzaba